Dysmenorrhoea - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တဈလတဈခါ ကိုကျခဲတဲ့ ပွသနာကို ပေါ့ပေါ့လေး သဘောထားသငျ့လား?
ရာသီလာခြိနျပထမ ၂ရကျ၊ ၃ရကျမှာ ဗိုကိအောကျပိုငျးနရောကိုကျခဲခွငျးကို မိနျးကလေးအမြားစုခံစားရလရှေိ့ပါတယျ။
ဒါဟာ ရာသီလာစဉျသားအိမျကြုံ့ခွငျးကွောငျ့ သားအိမျဆီသှေးမရောကျတဲ့ ခဏမှာ နာကငျြခွငျးခံစားရတတျတဲ့ ^^သဘာဝ^^ရာသီလာကိုကျခဲခွငျး( Primary dysmenorrhoea) ဖွဈနိုငျသလိုရောဂါတဈခုခု ကွောငျ့နောကျဆကျတှဲကိုကျခဲခွငျး(Secondary dysmenorrhoea)မြိုးလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
အမြားအားဖွငျ့ ရောဂါကွောငျ့ ကိုကျခဲခွငျးမြားသညျ အလှနျပွငျးထနျပွီး အစားအသောကျပကျြခွငျး၊ အနျခွငျးတို့နှငျ့ပါတှဲနတေတျပါသညျ။
အထကျဖျောပွပါ ပွသနာတှနေဲ့ တှဲပွီးဖွဈမဖွဈ သိဖို့ဆိုတာ
ကှနျပွူတာဓာတျမှနျ( Ultrasound) ရိုကျကွညျ့ခွငျး
ဆရာဝနျမှ မိနျးမကိုယျ စမျးသပျစဈဆေးမှုပွုပေးခွငျး တို့နှငျ့သာ အတိအကြ ခှဲခွားသိနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ ကိုကျခဲခွငျးဟာ ^^သဘာဝရာသီကိုကျခဲခွငျး^^ သခြောပွီဆိုရငျတော့ သကျသာမယျ့ နညျးလမျးလေးတှရှေိပါတယျ။
ဗိုကျအောကျပိုငျးကို သှေးလညျပတျမှုကောငျးအောငျ အသာအယာနှိပျနယျပေးပါ။
ပွငျးထနျလြှငျ ဆရာဝနျနဲ့တိုကျပငျပွီး အကိုကျအခဲပြောကျဆေးသောကျပါ။
ပွငျးထနျသောကိုကျခဲမှုမြားတှငျမူ ဆရာဝနျမှ သန်တတေားဆေးကဲ့သို့ ဟျောမုနျးဆေးပေး၍ ရာသီလာကိုကျခဲခွငျးကိုသကျသာအောငျ ညှနျကွားပေးတတျပါတယျ။
ခုဆို တဈလတဈခါ ကိုကျခဲတာဟာလညျး မပေါ့သငျ့ဘူးဆိုတာ သိလောကျပွီလို့ထငျပါတယျ။
တစ်လတစ်ခါ ကိုက်ခဲတဲ့ ပြသနာကို ပေါ့ပေါ့လေး သဘောထားသင့်လား?
ရာသီလာချိန်ပထမ ၂ရက်၊ ၃ရက်မှာ ဗိုကိအောက်ပိုင်းနေရာကိုက်ခဲခြင်းကို မိန်းကလေးအများစုခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ ရာသီလာစဉ်သားအိမ်ကျုံ့ခြင်းကြောင့် သားအိမ်ဆီသွေးမရောက်တဲ့ ခဏမှာ နာကျင်ခြင်းခံစားရတတ်တဲ့ ^^သဘာဝ^^ရာသီလာကိုက်ခဲခြင်း( Primary dysmenorrhoea) ဖြစ်နိုင်သလိုရောဂါတစ်ခုခု ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲကိုက်ခဲခြင်း(Secondary dysmenorrhoea)မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် ရောဂါကြောင့် ကိုက်ခဲခြင်းများသည် အလွန်ပြင်းထန်ပြီး အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အန်ခြင်းတို့နှင့်ပါတွဲနေတတ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပြသနာတွေနဲ့ တွဲပြီးဖြစ်မဖြစ် သိဖို့ဆိုတာ
ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန်( Ultrasound) ရိုက်ကြည့်ခြင်း
ဆရာဝန်မှ မိန်းမကိုယ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုပေးခြင်း တို့နှင့်သာ အတိအကျ ခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုက်ခဲခြင်းဟာ ^^သဘာဝရာသီကိုက်ခဲခြင်း^^ သေချာပြီဆိုရင်တော့ သက်သာမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။
ဗိုက်အောက်ပိုင်းကို သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင် အသာအယာနှိပ်နယ်ပေးပါ။
ပြင်းထန်လျှင် ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ပင်ပြီး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ပါ။
ပြင်းထန်သောကိုက်ခဲမှုများတွင်မူ ဆရာဝန်မှ သန္တေတားဆေးကဲ့သို့ ဟော်မုန်းဆေးပေး၍ ရာသီလာကိုက်ခဲခြင်းကိုသက်သာအောင် ညွှန်ကြားပေးတတ်ပါတယ်။
ခုဆို တစ်လတစ်ခါ ကိုက်ခဲတာဟာလည်း မပေါ့သင့်ဘူးဆိုတာ သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
Why Menstruation Ceases,Secondary Amenorrhoea?